Archive du 20190404
Marc Ravalomanana “Ny tombotsoa iombonana no katsahana”
Mialoha ny andraisan’ireo depiote ny andraikiny dia hofanina ho matihanina amin’ny politika ireo kandidan’ny TIMK25, mba tsy ho depiote tsangan’olona sy mpikatsaka tombontsoa manokana fa tena hikatsaka ny soa iombonana.
Kandida Hery Manankasina Nanao fianianana sahady
Omaly vao nanambara ny maha kandida ho depiote ao amin’ny boriborintany voalohany azy ny kandida tsy miankina laharana fahatelo, Hery Manankasina sy ny ekipany.
Fivarotam-boninkazo eo Anosy Misy misotasota manangana tsena eo anoloany
Mitaraina ireo mpivarotra voninkazo sy mpanao fanaingoana isan-karazany etsy Anosy ampitan’ny Antenimierandoholona Anosy amin’izao.
Basket-ball vehivavy Malagasy Mizotra tsara ny fanomanana ny lalaon’ny nosy 2019
Mizotra tsara ankehitriny ny fanomanan-tena ataon’ny ekipam-pirenena vehivavy Malagasy taranja basket-ball tarihan’ny mpanazatra mirahalahy Ndranto (Mb2All) sy Mémé (Asa Analamanga) hiatrika ny lalaon’ny nosy 2019 hatao any Maorisy amin’ny volana jolay ho avy izao.
Rakoto Grenat - Moramanga Mitohy ny fanampiana ny mpiara-belona sahirana
Nanohy ny asa soa mahazatra azy amin’ny fanampiana an’ireo olona sahirana any ambanivohitr’i Moramanga Atoa Rakoto Grenat mpandraharaha avy any Ambohitranjavidy Moramanga sy ny fianakaviany ary ny mpiara-misehatra aminy.
Ady amin’ny tazomoka Tena mbola mila ezaka be eto Madagasikara
Mbola ao anatin’ny aretina tena mamono olona eto Madagasikara ny tazomoka ary tena ilaina ny fanatonan’ny Malagasy ny tobim-pahasalamana amin’io trangan’aretina io.
Fankalazana ny taom-baovao Malagasy Hiavaka ny fampirantiana, hoy ny mpikarakara
Raha mahatsiaro tena fa Malagasy dia tongava manatrika ny taom-baovao Malagasy, hoy ireo mpikarakara ity hetsika nanomboka omaly izay hifarana ny sabotsy izao ity.
Mpanakanto mivondrona ao amin’ny OMDA Tsy manaiky ny hitantanan’ny OMACI ny vola nampidirin’izy ireo
Mifanitsaka tanteraka ny lalàna mifehy ny OMDA sy ny OMACI ankehitriny, fikambanana izay samy hivondronan’ireo mpanakanto Malagasy saingy ny iray mpihira ny iray mpilalao sarimihetsika.
Tsy fandriampahalemana Mitobaka ny basy an-tsokosoko
Misy basy miditra an-tsokosoko eto Madagasikara. Io no resaka manokana nivoitra nandritra ny tafa tamin’ny manamboninahitra ambony ara-miaramila eto amin’ny firenena. Nahazo vahana tokoa
AKAMA 67 HA Nomena baolina sy fanamiana ireo mpianatra lehibe
Anisan’ny hetsika tsy hananan’ireo mpianatra manana olana ara-pihainoana sakana mihitsy ny fanaovana fanatanjahantena. Anisan’ireny ny basket, ny atletisma, ny lomano saingy ilay kirioka
FIZASOA Hamondrona ireo zanak’i Soanierana Ivongo eto afovoan-tany
Fikambanana efa niorina tamin’ny taona 2014 ny FIkambanan’ny ZAnak’i SOAnierana Ivongo (FIZASOA) raha telo taona izao no nijoroany ara-panjakana.
SALON DE MASSAGE Manimba ny tovovavy Malagasy, karazana fivarotan-tena an-kolaka
Asa iray anisan’ny tena mahazo vahana eto amintsika ankehitriny ny “Salon de massage”. Hanotra ireo mpanjifa reraka na te haka aina kely no tena hatao amin’izany saingy mivadika ho zavatra hafa rehefa tonga any amin’ilay tsy eritreretina. Lasa miafara any amin’ny firaisana ara-nofo mantsy izy io, endrika fivarotan-tena an-kolaka.